Amaqabane - Ukupheka iiresiphi | Ukupheka iiresiphi (iphepha 2)
I-spaghetti ene-garlic prawns, isitya esityebileyo nesilula, isitya esihle kakhulu kumbhiyozo nosapho okanye nabahlobo.
Amaphiko enkukhu e-curry
Amaphiko enkuku ngekheri ngesitya esikhulu samaphiko, kunye nencasa eninzi. Ilungele isidlo sangokuhlwa esisesikweni, njenge-aperitif okanye njengesitya esiphambili.
I-Ham kunye ne-omelette yeshizi, i-omelette etyebileyo kunye emangalisayo. Iitortilla yindlela yokupheka ...
Jikelezisa ii-rolls ezifakwe itshizi, zizityebi kwaye zinamanzi. Njengabaqalayo bayonwabile kwaye bakhatshwa ziitapile sisitya esikhulu.
I-Microwave pastry cream, isityebi kwaye kulula ukuyilungisa. Ikrimu efanelekileyo ukulungiselela iidessert ezityebileyo nezilula.
Iisoseji kwiwayini emhlophe, isitya esilula, esilungele isidlo sangokuhlwa okanye njengesiqalo sokuqala, hamba kunye neetapile okanye imifuno.
Ukulahla kufakwe imifuno, ityebile kwaye kulula ukuyilungisa. Kukulungele ukuhamba nesitya, njengesiqalo sokuqala okanye isidlo sangokuhlwa.
I-Sanfaina, ipleyiti yemifuno eyahlukeneyo yokutya ehamba kunye nenyama, intlanzi kunye nezitya zeqanda. Isitya esityebileyo kakhulu semifuno.
I-omelette yemifuno, isitya ukulungiselela isidlo sangokuhlwa, njenge-skewer okanye ukuhamba nezinye izitya. Omelette etyebileyo yemifuno.
Irayisi kunye ne-cuttlefish kunye ne-prawns, isitya selayisi esilula kodwa esilungileyo. Kukulungele ukulungiselela usapho lonke.
I-piquillo pepper kunye ne-tuna isaladi, isaladi eyahlukileyo, enencasa eninzi kwaye kulula ukuyilungisa. Ilungele ukuqala.
Isipinatshi kunye netshizi croquettes, kulula ukuyilungisa kwaye ilunge kakhulu. Ukulungele ukutya imifuno, zinokusetyenziselwa ukusetyenziswa.
Ikhowudi nepelepele kunye neetumato eziqhotsiweyo, isitya sentlanzi esigcwele incasa. Ucebile kakhulu nge-sauce yeepilisi ezithosiweyo kunye neetamatato.
I-Lent fritters ene-anise, esisityebi kunye neswiti elula kwezi ntsuku ze-Ista. Ezinye iifritters zokukhapha ikofu.
I-Monkfish i-marinated, iresiphi elula kunye ne-flavourful fish, efanelekileyo ukutya kunye nesaladi okanye njenge-starter.
Iilentile kunye nemifuno kunye neetapile, isitya esipheleleyo nesilula ukulungiselela. Ilungele njengesitya esiphambili sosapho lonke.
Iitapile ngegalikhi kunye neparsigaigrette, isitya esityebileyo nesilula ukulungiselela. Isitya esifanelekileyo sokutya okanye ukuhamba nesitya.
I-squid kwi-anyanisi isosi, isitya esilula nesikhawulezayo sokwenza. Singayilungiselela kwangaphambili ukusuka kusuku olunye ukuya kolandelayo.
I-Cuttlefish kwisosi eshushu, isitya esimnandi, nesosi yokuntywila isonka, esilungiswa ngexesha elifutshane. Isitya esilula kakhulu ukwenza.
Iichickpeas ezinechorizo ​​kunye neetapile, isitya esimnandi setispuni, zilungele lonke usapho. Isitya esipheleleyo.
IArtichokes ngeham, isitya esityebileyo nesilula sokwenza. Efanelekileyo njenge-aperitif, ukuqala okanye ukuhamba nesitya. Zithambile kakhulu.
Ikhowudi ngekholifulawa, isitya esityebileyo nesilula, isitya esikhanyayo nesigqibeleleyo esikulungele ngokulinganayo isidlo okanye isidlo sangokuhlwa kusapho lonke.
Iitapile kunye nomvundla we-mushroom casserole
I-Potato yomvundla kunye ne-Mushroom Casserole, isitya esilula ukulungiselela, esilungele isidlo. Ipleyiti epheleleyo, exabisa isitya esinye.
Zucchini kunye cream cream
I-Zucchini kunye ne-apile cream, cream emnandi kunye egudileyo, yoqobo kunye eyahlukileyo ukuyilungiselela njengesiqalo sesidlo.
Inyama yenkomo kunye neetapile
Inyama yenkomo kunye neetapile, isitya esimnandi secephe, esityebileyo kwaye kulula ukuyilungisa. Isitya esilungele lonke usapho.
Ngaba ujonge isitya esecaleni senyama yakho, imifuno kunye neentlanzi? Zama le Potato iRosemary yeLemon ecoliweyo esiyenzileyo namhlanje.
Iitapile ezibhakiweyo kunye ne-béchamel
Iitapile ezibhakiweyo kunye ne-béchamel, isitya esilula kunye nesigqibeleleyo, esilungele ukukhapha inyama okanye izitya zentlanzi okanye njengesiqalo.
Amaphiko enkukhu ane-curry ebhaka.
Amaphiko enkukhu e-curry ebhakwe, isitya esimnandi esinencasa eninzi, i-marinade ekulungele ukulungiselela isidlo kunye nabahlobo.
Broccoli kunye nesuphu yemifuno
I-Brokholi kunye nesuphu yemifuno isitya esilula, esilungele isidlo sangokuhlwa okanye ukutya okwehlisayo, kulula kwaye ilunge kakhulu.
Broccoli kunye ne-bechamel ebhaka
I-Brokholi ene-bechamel ebhaka, isitya semifuno esityebileyo kunye nejusi, efanelekileyo ukwazisa abantwana abathanda ukuyithanda kakhulu.
Ii croquettes ezenziwe ngohlobo lwasekhaya
Ii croquettes ezenziwe ngohlobo lwasekhaya, okumnandi kwaye kulula ukuzilungiselela. Kukulungele ukuhamba nesidlo okanye njenge-aperitif.
I-Endives ezifakwe itshizi yebhokhwe kunye neavokhado
Ngaba uphoswa sisiqalo sokugqiba itafile yeeKumkani? Ezi endives zigcwele itshizi yebhokhwe kunye neavokhado zinakho ...
Hake kwisosi ngeeels
Hake isosi ngeeels, isitya esilungele umbhiyozo, silula kwaye kulula ukusenza. Ipleyiti efanelekileyo yamaqela eKrisimesi.
Iavokhado, itshizi kunye nesaladi yesalmon, efanelekileyo ukuqala isidlo, kulula ukuyilungisa kwaye intsha kakhulu.
Tiger iimbaza okanye zigxunyekwe
Imbaza zetiger okanye zigxunyekwe, isiciko esikhulu sokulungiselela iiholide okanye imibhiyozo. Isityebi kwaye kulula ukuyenza.
I-Monkfish ene-prawns kwi-sauce, isitya esilula ukulungiselela, nto leyo elungileyo kwezi holide ukulungiselela nosapho.
I-mousse yetshokholethi idessert enkulu yokugqiba isidlo esihle. I-mousse yetshokholethi ilula kwaye iyakhawuleza ukulungiselela.
Coleslaw, into ekulula ukuyilungiselela kunye nokuqala ngokutsha okanye icala. Iresiphi efanelekileyo yokukhapha inyama okanye iintlanzi.
I-Vichyssoise cream, ikrimu ethambileyo kunye nokhanyayo efanelekileyo kula maqela kwaye uqalise isidlo ngeplate ekhanyayo. Isitya esilula nesityebileyo.
Iicookies ezilula kunye nezityebileyo ezizaliswe zicookie, ezilungele i-snack okanye i-dessert enekofu. Abancinci baya kuyithanda kakhulu.
Iikhotile zetapile kunye negalikhi kunye neparsley
Iikhotile zetapile kunye negalikhi kunye neparsley, ii-croquettes ezimnandi kakhulu ezinencasa ukuba lonke usapho luya kuluthanda. Ilula ukuyilungiselela.
Irayisi ngamakhowa kunye neesoseji
Irayisi enamakhowa kunye neesoseji, isitya esilula nesityebileyo. Isitya esivela kweli xesha lokuwa, silungele isidlo esipheleleyo.
Amakhowa kwigalikhi yesosi
Amakhowa kwigalikhi yesosi, isitya esilula nesikhawulezayo sokwenza, kufanelekile ukulungiselela isilumkiso, isibheno okanye ukuhamba nesitya.
I-anyanisi kunye ne-omelette ye-eggplant
I-omelette nge-anyanisi kunye ne-eggplant, i-omelette etyebileyo kunye nejusi yesidlo sangokuhlwa esilungele abo bathanda imifuno
Ezi croquettes zucchini zityiwa zodwa. Baqala ngokugqibeleleyo okanye isitya ekugqibezela isidlo sakho. Zame!
Ipasta enenyama kunye netshizi ebhakwe
Ipasta enenyama kunye netshizi eziko, isitya esilula nesikhawulezayo. Isitya esipheleleyo nesityebileyo, esifanelekileyo njengesitya esinye sosapho lonke.
Ukulahla okufakwe itshizi
Iidombolo ezifakwe itshizi, zityebile kwaye zilula ukuzenza ngeeshizi ezithandwa kakhulu ngabantwana, zilunge kakhulu.
Iibhola zenyama ezifakwe iqanda
Iibhola zenyama ezixhonyiweyo ezifakwe amaqanda, isidlo esimnandi nesilula ukulungiselela, esilungele ukutya njengesiqalo sokuqala okanye njengesikhuthazi.
I-San Jacobos ene ham kunye netshizi, isitya esilula kakhulu sokwenza ekhaya. Iresiphi wonke umntu angayithanda ngokuzaliswa kwesonka samasi.
Ezi hazelnut, ibhanana kunye nesinamon cream toast lukhetho olukhulu kwisidlo sakusasa ukuqala usuku ngamandla.
IMacaroni ene-zucchini kunye netshizi, isitya esimnandi se-pasta ukulungiselela usapho lonke, isitya esipheleleyo nesilula ukulungiselela.
I-sweet potato cream
I-sweet potato cream, cream elula kwaye elula, efanelekileyo njenge-starter okanye isidlo sangokuhlwa. I-cream yasekwindla eya kothusa wonke umntu.
Amadombolo emifuno ejiweyo
Iidombolo zemifuno ejiweyo, etyebile kwaye igcwele incasa yokukhapha nasiphi na isitya okanye isonka esincinci. Ilungele abancinci.
I-spaghetti yeZucchini enenkuku, isitya esisempilweni kakhulu. Isitya sokumangalisa usapho okanye abahlobo kwisidlo.
Isaladi yepepile yePiquillo
Isaladi yepepile yePiquillo, isaladi efanelekileyo njengesiqalo sokuqala okanye isitya esinye. Kuyinto emnandi kwaye kulula kakhulu ukuyilungiselela.
Ibhokhwe netshizi yetumato jam
Ezi itshizi yebhokhwe kunye ne-tomato jam toast lukhetho olukhulu njengesibheno okanye ukuqala kwesidlo sasemini okanye isidlo sangokuhlwa nabahlobo.
Icauliflower ebethiweyo, indlela elungileyo yokutya icaulifulawa, ilungele abantwana abanzima ukuyitya.
Imbaza Kwisosi Eshushu
Imissels kwisosi ebabayo, isitya esimnandi nesosi etyebe kakhulu kwaye ilula esinokuyilungiselela kwangaphambili.
I-cheesecake kunye ne-caramel sauce
Ikhekhe yetshizi kunye nesosi ye-caramel, isitayile esityebe kakhulu esinokulungiselela emva komhla wokuzalwa okanye isidlo sepati.
Iigarlic prawns, isitya esityebileyo nesilula, esilungele ukuqala okanye itapa esinokuyilungiselela ngexesha elifutshane.
Ihlobo le-cannelloni, isitya esipholileyo sokulungiselela ukuqala okanye ukubetha Isitya esilula esinokusilungiselela kwangaphambili.
I-squid kwi-anyanisi isosi, isitya esilula nesityebileyo esinokuwulungiselela ukuba sithambise okanye siqale.
Isaladi yetamatato kunye ne-mozarella
Isaladi yetumato kunye ne-mozarella, isitya sendabuko sase-Italiya, ilungile njengesiqalo kwaye ehlotyeni ityebile kwaye intsha, igcwele incasa.
Isempilweni, isityebi kwaye kulula ukuyilungisa isandwich. Ilungele isidlo sakusasa, isidlo sangokuhlwa okanye nangaliphi na ixesha, ngoku kobu bushushu baziva ngathi.
I-avovoc, itomato kunye ne-toast yeshizi eyityiweyo
Ngaba uyathanda ukwahluka kwisidlo sakusasa? Ezi avokhado, iitumato kunye ne-toast yeshizi eyosiweyo yenye indlela elungileyo yokuqala usuku lwakho.
Inkukhu kwi-anyanisi isosi
Inkukhu kwi-anyanisi isosi, isitya esilula ukulungiselela, kunye nencasa eninzi. Isitya senkukhu esithandwa yintsapho yonke.
Ikeyiki ikeyiki flan itshokolethi
Ikeyiki ikeyiki flan itshokolethi, dessert elula ngaphandle eziko, kulungile kakhulu. Ilungele usuku lokuzalwa okanye ipati yabantwana.
Isaladi yafakwa intaba mlilo nge salmon
IiVolovanes ezifakwe isaladi yesalmon, isitya esikhawulezayo nesilula ukulungiselela. Ukuqala ngokupheleleyo ukuqala ukutya.
Izinto ezigqityiweyo zokutshaya i-salmon rolls
Imiqulu ye-salmon yokutshaya, i-starter elula kwaye elula. Kupholile kakhulu ukuqala isidlo okanye isidlo sangokuhlwa kusapho lonke.
IGazpacho isonka, isidlo esimnandi esilungele ihlobo, isiqalo esitsha, esigcwele iivithamini kunye neeminerali. Iresiphi efanelekileyo.
Isityalo seqanda esityiweyo Gratin
I-aubergines e-Stuff okanye i-gratin, isitya esipheleleyo esinokulungiswa njengesitya esinye. Kukulungele ukuthatha ukusebenza.
Isaladi exutyiweyo kunye nesosi epinki
Isaladi exutyiweyo kunye nesosi epinki, ukuqala ngokutsha kweentsuku zehlobo. Njengecala okanye ukuqala kwayo kulungile.
Irayisi emdaka ngenkukhu kunye nama-mushroom
Irayisi emdaka ngenkuku kunye nama-mushroom, isitya esilula nesilula ukusilungiselela.Isitya selayisi silula kwaye ...
Ikhekhe lepheki kunye nemifuno ebhaka
Ikhekhe lepheki kunye nemifuno ebhakiweyo, efanelekileyo ukulungiselela isidlo sangokuhlwa nayo yonke imifuno esinayo efrijini. Sityebi kwaye silula.
Isaladi kunye newame yaselwandle
Isaladi kunye neWakame yolwandle, isaladi elula kwaye ekhawulezayo ukuyilungisa. Isitya esisempilweni kunye neevithamini ezininzi kunye neeminerals.
Ikhekhe lepheki ekhekhe kunye necream yetshokholethi kunye neeamangile
Coca de hojadre kunye netshokholethi kunye ne-almond cream, icoca elula kwaye ekhawulezayo ukulungiselela i-dessert okanye imithendeleko yaseSan Juan.
Iigarlic cockles, isityebi kunye ne-mollusk elula ukuyilungisa. Ilungele ukulungiselela ukuqala, i-snack okanye i-tapas okanye ukuhamba nezinye izitya.
Amaqanda aqhekezayo ngeetapile kunye neham
Amaqanda aqhekeziweyo ngeetapile kunye neham, isitya esimnandi esiza kuthandwa ngumntu wonke. Ilungele ukuqala okanye njengokutya okulula. Isitya esilula kakhulu.
I-Basil okanye i-pesto sauce
I-basil okanye i-pesto sauce, isosi yesiko lokutya kwase-Italiya ehamba kunye ne-pasta, imifuno, intlanzi, inyama, iisaladi ...
Iingqungquthela ezifakwe ngeflan
I-Empanadillas ifakwe i-flan, i-dessert enomnandi okanye i-snack. Ezinye iidombolo ezimnandi ngeflan wonke umntu angazithanda, kulula kakhulu ukuzilungiselela.
Isalmon ebhaka kunye nemifuno
I-Salmon enemifuno ebhakiweyo, isitya esikhawulezayo nesilula ukusilungisa, esinokulungiselela ukuqala kwayo okanye isitya esinye. Isitya esipheleleyo.
Ikhekhe elinosawoti lwesipinatshi, isitya esilula ukulungiselela, silunge kakhulu, silungele ukulungiselela isidlo sangokuhlwa esikhawulezayo nesilula. Ilunge kakhulu kusapho lonke.
Iisoseji kwi-anyanisi isosi
Iisoseji kwi-anyanisi yesosi isitya esityebileyo, esilula nesikhawulezayo ukulungiselela. Ilungele ukuqala okanye ukuthatha ukusebenza.
Iimbambo zehagu kwisosi
Iimbambo zehagu kwisosi, isitya esilula nesikhawulezayo ukulungiselela, ezilungele isidlo sasemini okanye isidlo sangokuhlwa. Inokulungiswa kwangaphambili.
I-Puff pastry braid ngethokoleta kunye nama-walnuts
I-Puff pastry braid ngetshokholethi kunye namandongomane, idessert elula kwaye ekhawulezayo ukuyilungiselela, ilungele ukuhamba nekhofi okanye isidlo.
I-Ham kunye neeshizi zepancakes
I-Ham kunye netshizi yamaqebengwana, iikeyiki kunye nokuzaliswa okutyebileyo, okulungele ukulungiselela isidlo sangokuhlwa esikhawulezayo nesilula, sikhatshwa yipico de gallo.
I-cream ye-asparagus eluhlaza, elungele ukulungiselela iikhrim ezishushu okanye ezibandayo okanye iisuphu. Isitya esisempilweni nesinoqoqosho, esikhawulezayo ukulungiselela.
Umvundla casserole kwisosi
Umvundla u-casserole kwisosi, isitya esityebileyo somvundla ososi, esityebileyo kwaye silula esixabisa njengesitya esikhethekileyo esihamba neminye imifuno okanye iitapile.
Ithenda kunye nemifuno ethosiweyo kunye namakhowa
Jongana nemifuno eqhotsiweyo kunye namakhowa isitya esipheleleyo sosapho lonke. Isitya esinokuthi sisebenzise imifuno esiyithanda kakhulu.
Ispaghetti esine-tuna sisitya sepasta esiza kuthandwa lusapho lonke, kulula kwaye sikhawuleze ukulungiselela isidlo esipheleleyo ekufuneka usizamile.
Iidhami zeHam kunye noshizi
Iidhami zeham kunye noshizi, okumnandi kwaye kulula ukuzilungiselela ezi dombolo wonke umntu angazithanda. Njengesiqalo sokuqala okanye i-snack zilungile.
Iitapile zemicrowave kunye nepepile
Iitapile zemicrowave kunye nepepile isitya esilula, esikhawulezayo nesinexabiso eliphantsi. Isitya esinokusilungiselela nanini na.
I-Torrijas kunye neorenji, idessert yendabuko kwezi ntsuku zePasika. Ngomnwe weorenji zilungile kakhulu.
I-Cod au gratin ene-aioli, iresiphi elungileyo kakhulu yokulungiselela kwezi ntsuku zePasika. Isitya sekhowudi esihle kakhulu nesilula.
Isuphu yemifuno eyenziwe ekhaya
Isuphu yemifuno eyenziwe ekhaya, isitya esilula nesisempilweni. Isitya esifudumeleyo ukuba usonwabele kwisidlo sangokuhlwa esilula, iyanelisa kwaye intle kakhulu.
I-asparagus omelette, isidlo sangokuhlwa esikhawulezayo nesilula. I-omelette elula kunye esempilweni. Njengesidlo sangokuhlwa okanye ukuqala kwayo kufanelekile kusapho lonke.
Inkukhu ifakwe nge-mushroom
Inkukhu efakwe ngamakhowa, isitya esityebileyo, esilula nesigqibeleleyo, esilungele lonke usapho. Isitya esinokulungiselela kwangaphambili.
Iidonathi ngeorenji, zimnandi kwaye zilula ukuzilungiselela, zinencasa yeorenji emnandi kakhulu, zilungele ukuhamba nekhofi.
I-pastry e-Puff ezaliswe yityhuna kunye neqanda, iresiphi elula elungileyo kakhulu, elungele ukulungiselela isidlo sangokuhlwa kusapho lonke.
IMacaroni kunye netumato kunye nebhekoni
IMacaroni ngetumato kunye nebhekoni, isitya esityebileyo sepasta njengekhosi ephambili. Isityebi kwaye kulula ukuyilungisa kwaye wonke umntu angathanda.
Ukhilimu weZucchini ngeetapile
Ukhilimu we-Zucchini ngeetapile sisidlo esifanelekileyo sokuzenzela ekhaya ukufaka imifuno. Isitya esilula nesikhawulezayo ukulungiselela.
Iitapile ezixineneyo zenyama
Iitapile zigcwele inyama, isitya esityebileyo nesigqibe kakhulu esinokulungiselela usapho lonke. Isitya esinokusilungiselela ngezithako ezimbalwa.
I-Bimi isuswe ngesosi yesosi
I-Bimi isuswe isosi yesosi, isitya esisempilweni kunye neepropathi ezininzi, ezilungele ukukhapha nayiphi na inyama okanye isitya sentlanzi.
I-Cheese kunye ne-frankfurt pastries
Iitshizi kunye ne-frankfurter puff pastries kulula ukuzilungiselela ii-rolls, ezilungele isidlo sangokuhlwa okanye i-snack okanye itheko lokuzalwa.
I-Potato omelette kunye ne-chorizo
I-omelette yaseSpain kunye ne-chorizo, isitya sesonka seetapile esinencasa engaphezulu kunechorizo. Isitya esithandwa ngumntu wonke.
Inkukhu ebhakiweyo enemifuno
Inkukhu ebhakiweyo enemifuno, isitya esilula nesithandekayo ukulungiselela yonke intsapho. Inkukhu enencasa eninzi kwaye uya kuyithanda kakhulu.
Iitapile kunye neparmesan croquettes
Iitapile kunye neParmesan croquettes, ezilungele ukulungiselela itapas okanye njengokuhambelana nayo nayiphi na inyama okanye intlanzi.
Iilenti ezinechorizo ​​kunye neetapile
Iilenti ezinechorizo ​​kunye neetapile, isidlo esifanelekileyo kwiintsuku ezibandayo. Isitya esicocekileyo setispuni salo lonke usapho, sigqibe kakhulu
I-Swiss chard eneetapile zepaprika
I-Chard eneetapile zeetapile, isitya esilula, esilula kwaye esigcweleyo, kufuneka sikhathale kunye neqanda elibilisiwe kwaye sinesidlo sangokuhlwa.
Broccoli kunye nesipinatshi cream
Broccoli kunye nesipinatshi cream isidlo esithuthuzelayo esidlulisa ukubanda. Zikulungele isidlo sangokuhlwa esilula okanye njengesiqalo sokuqala.
Burritos yenkukhu kunye nepelepele
I-Burritos yenkukhu kunye nepelepele, ezilungele ukulungiselela isidlo sangokuhlwa esisesikweni kunye nabahlobo okanye nosapho. Ezinye burritos esinokuzilungiselela ngexesha elifutshane.
Ubusi beebambo zehagu, isitya esigcwele incasa kunye nokungafani, sisityebi kwaye silula. Kukulungele ukulungiselela usapho lonke.
Ii croquettes ezenziwe ekhaya
Ii croquettes ezenziwe ekhaya, ubumnandi beekrakethi zilunge kakhulu. Inketho elungileyo yokuhamba nesitya okanye njengesiqalo.
Ubhontshisi weembotyi kunye neetapile
Isityu seembotyi kunye neetapile, isitya esenziwe ekhaya, esilula, ekulula ukusilungiselela nesinexabiso eliphantsi. Isitya semidumba kusapho lonke.
Ukulahlwa kugcwele itshokholethi, idessert elula, ekhawulezayo nenencasa. Ilungele i-dessert, i-snack okanye nasiphi na isihlandlo.
Amakhowe kunye neekroette zeleki
La makhowa kunye neekroette zeleki zinencasa eninzi kwaye zilungile njengesiqalo sokuqala xa undwendwela. Ngaba unesibindi sokuzilungiselela?
Artichoke kunye negalikhi omelette
IArtichoke kunye negalikhi omelette, ilungele isidlo sangokuhlwa esikhawulezayo nesilula. Ngoku ixesha le-artichoke liqala, kuya kufuneka uthathe ithuba lokuzitya.
URavioli kunye nemifuno
URavioli kunye nemifuno, iresiphi elula kunye esempilweni ukulungiselela. Efanelekileyo njengesiqalo sokuqala, isitya esiya kuthanda lonke usapho.
Zonke iintlobo ngeegalikhi prawns
Ii-angulas ezinee-prawns zegalikhi, ezifanelekileyo njengeetapas, ukuqala, isidlo sasemini okanye isidlo sangokuhlwa. Kwezi holide sisitya esiqhelekileyo, simnandi kwaye kulula ukusilungisa.
Ukotapeya kunye nononkala i-cocktail
I-avocado kunye ne-crab stick cocktail, ukuqala okutsha nokukhanya, okulungele ukuqala ukutya ngeli xesha leeholide.
I-canape yengulube ye-tenderloin kunye ne-brie cheese
Kule veki siza kuqhubeka nokucebisa ngezimvo malunga nemibhiyozo yeKrisimesi elandelayo. Ingulube iTenderloin kunye neBrie Cheese Canape yi ...
I-cocoa yetshokholethi, iswiti emnandi yokulungiselela ekhaya. Ilungele emva kwekhitshi elungileyo kwaye iyamangalisa iindwendwe zethu.
Iitapile ezicujiweyo gratin
Iitapile ezicujiweyo igratin, iresiphi elula kunye neyasekhaya. Isitya esifanelekileyo sokutya njengesiqalo sokuqala okanye ukuhamba nezinye izitya.
I-chicken skewers enerayisi emdaka, isitya esilula nesinempilo. Iresiphi elula ukuyilungisa, intle kakhulu.
I-Butifarra enamakhowa, iresiphi elula kakhulu kwaye ekhawulezayo esinokuyilungiselela usapho lonke. Isitya esinencasa eninzi.
Itswele kunye ne-tuna omelette
I-anyanisi omelette kunye ne-tuna, iresiphi elula kunye nekhawulezayo yokwenza. Kukwasebenza oku nakuthi kwisidlo sangokuhlwa esikhawulezayo ukulungiselela isandwich.
Ithanga, iitapile kunye necarrot puree
Ithanga, iitapile kunye necarrot puree, kulula ukuyilungiselela isidlo esempilweni kwaye esilula. Isitya esifanelekileyo secephe sokuhamba nobandayo.
UPita wafaka inyama yenkukhu
I-Pita ifakwe inyama yenkukhu kunye nesaladi ene-mayonnaise isosi, efanelekileyo ukulungiselela isidlo sangokuhlwa esisesikweni kunye nabahlobo, isitya esilula.
Amanqatha enkukhu amisiweyo
Amathanga enkukhu afakwe ibhekoni kunye netshizi, isidlo esifanelekileyo ukulungiselela ipati okanye umbhiyozo nosapho. Zilula kwaye zilunge kakhulu.
I-pizza ngentlama yepancake
I-pizza ngentlama yepancake, efanelekileyo ukulungiselela isidlo sangokuhlwa esikhawulezileyo nesingacwangciswanga, zilungile kwaye ziyakhawuleza ukuzilungiselela.
IMacaroni gratin enemifuno
I-Macaroni gratin kunye nemifuno ilula kwaye kulula ukuyilungiselela isidlo. Isitya semifuno esiza kuthandwa ngumntu wonke. Isitya esimnandi kakhulu nesityebileyo.
Amakhowe ahlukeneyo kwisosi
Amakhowa ahlukeneyo esosi, iresiphi elula eluncedo njenge-tapa, ukuqala okanye ukuhamba nesitya, inyama okanye intlanzi. Zilungile kakhulu.
Iitapile ezicujiweyo kunye netshizi zokuhamba
Iitapile ezicujiweyo esizicebisayo namhlanje ziluhlaza ngakumbi kwaye ziyahambelana nenyama, intlanzi kunye nemifuno.
Ithenda yehagu ene-chmpiñones cream
Ithenda yehagu enekhrimu yamakhowa, iresiphi elula kwaye elula ukuyilungisa. Ilungele isidlo sepati okanye isidlo sangokuhlwa.
Ikhekhe leHam kunye noshizi
Ikhekhe likaHam kunye netshizi, iresiphi elula eya kuthandwa ngumntu wonke. Iresiphi elula efanelekileyo yesidlo sangokuhlwa esisesikweni kunye nabahlobo.
Inyama yenkomo kunye neartichokes
Inyama yenkomo eneartichokes, isitya sesipuni sendabuko. Isitya esipheleleyo, esifanele ukuba sisitya esinye. Ilungele lonke usapho.
Iidonki kunye neeshizi
Iidonki kunye neeshizi, iresiphi elula esebenza njengesiqalo okanye icala. Kananjalo iitapas ziyonwabisa.
I-Bonito kunye netumato eyenziwe ekhaya
I-Bonito kunye netumato eyenziwe ekhaya, isitya esilula nesinencasa kakhulu. Kukulungele ukwazisa iintlanzi eziluhlaza okwesibhakabhaka, kunye nesosi yetumato kulungile kakhulu.
IMacaroni nenyama kunye nemifuno
IMacaroni enenyama kunye nemifuno, isitya esimnandi kakhulu esifanelekileyo sosapho lonke. Iresiphi elula kwaye eluncedo.
Amabele enkukhu kunye nemifuno
Amabele enkukhu ngamayeza, isitya senkukhu esilula kunye nesipheleleyo esinencasa eninzi. Iresiphi efanelekileyo yosapho lonke.
Isitshalo seqanda kunye ne-omelette ye-zucchini
Isitshalo seqanda kunye ne-omelette ye-zucchini, isitya esilula nesilula sokwenza. ipleyiti yemifuno. ilungele isidlo sangokuhlwa okanye i-aperitif.
Ikeyiki Mascarpone itshizi ngaphandle eziko
Ikeyiki Mascarpone itshizi ngaphandle eziko, ikeyiki elula ukulungiselela kwaye ngaphandle eziko. I-dessert efanelekileyo yesonka emva kwesidlo esihle.
Isipinatshi ravioli kunye nesosi yamakhowa
Isipinatshi ravioli kunye nesosi yamakhowa isitya sepasta esilula, iresiphi epheleleyo. Njengesiqalo sokuqala okanye isitya esinye kufanelekile.
Itswele, zucchini kunye neetapile omelette
I-anyanisi yeZucchini kunye neetapile omelette iresiphi elula negqibeleleyo ukulungiselela isidlo sangokuhlwa, itapa okanye isidlo sasemini. Ilungele lonke usapho.
Inyama yehagu kunye neetumato
Inyama yehagu enetumato, isityu senyama esilula nesikhawulezayo ukulungiselela, zilunge kakhulu kunye nesosi emnandi onokuyithanda kakhulu.
Isandwich yemifuno kunye neavokhado
Isandwich yemifuno kunye neavokhado, ityebile kwaye ilula kwisidlo sangokuhlwa okanye i-snack ilungile kwaye nge-avokhado ibonakala intle. Uphilile kakhulu.
Cream ikhukhamba ebandayo
Ukhilimu wecucumber ebandayo, ukuqala okuqabulayo okanye isikhuthazi ukuthatha ehlotyeni. Isitya esilula, esikhawulezayo ukulungiselela kwaye sisempilweni kakhulu.
Ivatala kunye nebanana smoothie
Ivatala kunye nebanana smoothie, isityebi esenziwe ekhaya isithelo esityibilikayo, isidlo sakusasa okanye i-snacks zasehlotyeni. Ilungele ukutya iziqhamo.
Isobho setomato ebandayo
Isophu ebandayo yetomato, ekhawulezayo, entsha kunye nokulula ukuyilungisa. Kukulungele ukwenza njengesiqalo sehlobo.
I-squid a la romana
IiCalamares a la romana, ukuqala okumnandi okanye isitya, sinokukufumana njenge tapa kwiindawo ezininzi ze tapas. Isityebi kakhulu.
Ivatala kunye netumato
Ivatala kunye ne-tomato gazpacho, ukuqala ngokutsha ukutya. Ikhanya kakhulu kwaye ityebile, ilungele lonke usapho.
I-Meringue enobisi lwesinamoni igranita
I-meringue yobisi nesinamon, i-dessert entsha etyebileyo. Kananjalo njengesiqhoboshi sokuzihlaziya kunye nokupasa ubushushu.
Amadombolo e-tuna othosiweyo
Izipayisi zetyhuna ezenziwe ekhaya, ezilungele isivamvo okanye into yokuqalisa. Ukuzaliswa okuya kuthandwa ngumntu wonke kwaye kulungile kakhulu.
Isaladi yelizwe isitya esitsha esilula ukulungiselela iintsuku zehlobo. Ilungele isidlo sasemini okanye isidlo sakusapho yonke.
Ikhekhe elibandayo le-salmon, isiqalo esihle kakhulu ehlotyeni. Ilungele ukungena okanye isidlo sangokuhlwa esisesikweni, kulungile kakhulu.
Ubhontshisi kunye nesaladi yekhowudi
Iimbotyi kunye ne-cod isaladi isidlo esitsha esifanelekileyo njengesiqalo sokuqala okanye isidlo sangokuhlwa sasehlotyeni. Isitya esipheleleyo kakhulu sosapho lonke.
Broccoli nge ham kunye noshizi
I-Brokholi eneham kunye netshizi sisitya esilula nesikhawulezayo ukulungiselela. Isitya esifanelekileyo sempilo njengesiqalo sosapho lonke.
IGazpacho ngaphandle kwesonka
IGazpacho ngaphandle kwesonka, isitya esilula, esisempilweni kunye nesilula esifanelekileyo njengesiqalo sokuqala okanye ikhosi yokuqala. Isitya esipholileyo ehlotyeni.
Ii-aubergines eziqhotsiweyo ezinobusi, isitya esilula esigcwele incasa, umahluko kubusi obuwenza isitya esahlukileyo nesityebileyo.
Iisaladi ezigcadiweyo kunye nePepper Salad
Isaladi yeetapile kunye nepepile eyosiweyo, isitya esifanelekileyo ehlotyeni, esitsha kwaye simnandi. Ilula kakhulu ukuyilungiselela, ilungele lonke usapho.
Isobho se-tomato esisinyeneyo kunye ne-tuna kunye ne-tuna
Iisuphu ezibandayo ziyahlaziya kakhulu ehlotyeni. Enye yezinto endizithandayo yile isuphu yetomato eshinyeneyo, ene ...
Iminqathe kunye neelikeki
I-kroti kunye ne-leek cream, elula kwaye elula yokuqalisa. Ikrimu esinokuyitya ishushu okanye ibanda. Ilungele lonke usapho.
Inyama yasekhaya eyenziwe ngehagu kunye nehagu zehagu zeCurger
Inyama yenkomo eyenzelwa ekhaya kunye nehagu zehagu zecryry, uyolo olonwabisayo. Ilungele isidlo sangokuhlwa esingacwangciswanga, apho abantwana baya konwaba.
Ipepile eyosiweyo ngeoyile
Ipepile eyosiweyo eontini, iresiphi elula, iipepile zizinto ezilungileyo ezihambelana nezinye izitya ezifana nenyama, intlanzi, iisaladi ...
I-Strawberry kunye ne-tomato gazpacho
I-Strawberry kunye ne-tomato gazpacho, isiqalo esitsha esigcwele iivithamini. Kukulungele ukuchitha iintsuku ezishushu. Isitya esinemifuno emininzi.
I-Andalusian gazpacho yenye yeezitya ezingasokuze ziphoswe kwitafile esemazantsi eSpain e ...
Namhlanje ndikuzisela ezi ntlobo zemveli zemveli zaseRussia, ukutya okumnandi okuthinta ngendlela engaqhelekanga eya kuvuyisa ...
Isonka esibhakiweyo sifakwe itshizi
Loin wafaka itshizi eziko kunye neetapile, isitya esilula sokwenza kwaye sithandwa kakhulu. Ithenda emnandi kunye nesityebi efakwe itshizi.
I-Puff pastry kunye nebhekoni kunye noshizi
I-pastry ye-puff kunye nebhekoni kunye noshizi, eminye imiqulu ye-pastry, ilungele i-snack, okanye isidlo sangokuhlwa esingaqhelekanga. Baya kuthandwa ngabo bonke.
I-bacon kunye ne-cheese mini quiches
Ezi quiches zincinci zincinci ezimnandi onokuzenzela nawuphina umsitho. Zithambile kwaye zinamanzi kangangokuba ...
Intonga yefilo eqholiweyo
Ezi ziqholo zefilo zentlama zinomtsalane wokusebenza nakweyiphi na imeko. Zilungiselelwe kwimizuzu embalwa ...
UFalafel yicroquette echotshoziweyo yechickpea. Ukulungiselela okuqhelekileyo kuMbindi Mpuma apho sinokuthi sibandakanye ezininzi ...
I-Ham kunye nee-croquettes zamaqanda abilayo
I-Ham kunye nee-croquettes zamaqanda abilisiweyo, i-aperitif, i-starter okanye icala, kulula ukuyilungisa kwaye abantwana bayathanda kakhulu.
Ikholifulawa hummus yenye yeentandokazi zethu. Inguqulelo entsha yesitya samazwe aphesheya esithanda kakhulu njenge-snack.
Iifama eziqhotsiweyo kunye nebhekoni
I-ertyisi eyenziwe nge-bacon, isitya esilula kunye nesigqibeleleyo. Ngokukhawuleza ukulungiselela, kulungile njenge-starter okanye icala.
Inkukhu kwi-sauce ye-carbonara
Inkukhu kwi-sauce ye-carbonara, isitya esilula esilungiselelwe ngexesha elifutshane kwaye esilungele nakuphi na ukutya. Isitya esihle kakhulu.
I-Turkey kwi-sauce kunye namazambane
I-Turkey kwisosi kunye neetapile, isitya esipheleleyo esinokuhamba nayo nantoni na esiyithandayo kakhulu, ezinje ngeetapile, imifuno okanye irayisi ephekiweyo.
Isipinashi kunye ne-Strawberry Salad
Isipinatshi kunye nesaladi ye-strawberry, kunye nokufika kwemozulu elungileyo iisaladi zinomdla kakhulu. Bangazilungiselela ukusuka kuninzi ...
Iimbotyi eziluhlaza nge ham kunye netswele
Iimbotyi eziluhlaza ngeham kunye netswele isitya esityebileyo nesempilweni. Kukulungele ukuhamba nesitya okanye njengesitya esinye kwisidlo sangokuhlwa.
Ipasta enesipinatshi kunye nenkukhu
Ipasta enesipinatshi kunye nenkukhu iresiphi elula nekulula ukuyilungisa, ilungele abantwana ukuba batye imifuno. Isitya esipheleleyo.
IMozzarella yeBhola yenyama edibeneyo
IMozzarella yafaka inyama yenyama. Ukutya akufuneki kube kuyadika, ngamanye amaxesha asazi ukuba silungiselele ntoni kwaye kuncinci ...
I-Polenta ene-arugula kunye ne-strawberry saladi
I-polenta ethosiweyo isebenza njengesihambisi kwesi sidlo ngearugula elula kunye nesaladi yequnube. Ngaba unesibindi sokuzama?
Iklabishi enezitapile zepaprika
Iklabishi enezitapile zepaprika, iresiphi elula nesempilweni yokulungiselela. Isitya esingabizi kakhulu esenziwe ngezinto ezimbalwa.
Ikhekhe lepheki kunye nemifuno kunye netshizi
Ikhekhe lepheki kunye nemifuno kunye netshizi, iresiphi elula negqibeleleyo. Ilungele ukulungiselela isidlo sangokuhlwa esingacwangciswanga kusapho lonke.
I-Pepper Hummus egosiweyo
Siqala impelaveki silungiselela ukuba yeyiphi na indlela efanelekileyo yokugqibezela isidlo sangokuhlwa: i-hummus ...
Iintliziyo ze-artichoke ezibiweyo, iresiphi elula kunye necebileyo yemifuno. Isitya esifanelekileyo sokukhapha nasiphi na isitya okanye njengesiphefumli.
I-Cod fritters iresiphi, iresiphi elula fritters, efanelekileyo ukulungiselela ngePasika okanye nakuphi na ukutya.
IArtichokes kwisosi, iresiphi yemifuno esosi. Kukulungele ukuhamba nesitya okanye ukuqala. Isitya esisempilweni.
Ichickpea kunye ne-chilli hummus
I-Hummus yipasta e-creamy eyenziwe nge-chickpeas, isitya esiqhelekileyo se-Middle East cuisine….
I-Turkey kunye ne-Cheese French Omelette
I-Turkey kunye ne-cheese French omelette, i-omelette elula kwaye ekhawulezayo yokulungiselela, ilungele isidlo sangokuhlwa okanye abantwana.
Imifuno kunye nesobho senkukhu
Imifuno kunye nesobho senkukhu, isitya esithuthuzelayo kwezi ntsuku zibandayo, zifudumele kakhulu kwaye zenziwe ekhaya. Isobho sokuzalisa kunye nesilula.
Iitshokholethi ezineziqhamo ezomisiweyo
Iitshokholethi ezineziqhamo ezomisiweyo, i-dessert elula nekhawulezayo yokwenza. Ayidingi oveni, kufuneka siyivumele ipholile efrijini kwaye izakulunga.
I-Puff pastry kunye neetatayi
I-Puff pastry ne-tomato, iresiphi elula kwaye ekhawulezayo ukulungiselela. Njengesiqalo sesidlo sangokuhlwa kuhle kakhulu kwaye kuhle kakhulu.
Iilenti kunye ne-octopus
Iilentile nge-octopus, isitya secephe esinamaqhekeza engwane, isityu esilula nesahlukileyo ukulungiselela, ngokuqinisekileyo uya kuyithanda.
I-curry pie yenkukhu enetyuwa
Namhlanje ndikuzisela le khekhe ikhekhe inkukhu enetyiwa enetyiwa, inguqulelo yeQuiche de yemveli ...
I-Serrano ham kunye ne-croquettes zeshizi
I-Serrano ham kunye ne-croquettes zeshizi, i-croquettes emnandi kunye nejusi ukulungiselela i-tapas okanye i-starter. Kulula ukuyilungisa.
Isipinatshi se-lasagna isitya, iresiphi enkulu enokulungiswa kwangaphambili. Isitya esityebileyo nesempilweni.
Isoya eluhlaza isitya esityebileyo sesipuni, kufana neelentile. I-Soy yimbotyi esempilweni kwaye ilula.
IMacaroni Bolognese isitya esityebileyo nesigqibeleleyo, esilungele lonke usapho. Isitya esipheleleyo esixabisekileyo njengesitya esinye.
I-bacon enetyuwa kunye ne-muffins zeshizi
Ukulungiselela isidlo sangokuhlwa kuhlala yenye yekhitshi ongayithandiyo, ngokubanzi, ufika ebusuku udiniwe kwaye ...
Inkukhu kunye neinanapple skewers
Inkukhu kunye neinanapple skewers, iresiphi elula ukuyilungisa. Isitya esigcwele incasa esiya kuthandwa lusapho lonke. Ilungele ukoyisa.
Ihake kunye ne-prawn cake
Le khekhe imnandi ye-hake kunye ne-prawn ilungele ukukhonza zombini kwimeko ekhethekileyo, njengaso nasiphi na isidlo ...
Ikhowudi yokubhaka kunye neetapile
Ikhowudi ebhaka iitapile, isitya esikhulu sekhowudi esilula ukusilungiselela. Isitya esinokulungiselela emathekweni.
Iifilikhi zenkukhu ezibiweyo
Inkukhu eyosiweyo ifaka isitya esilula nesingabizi mali ininzi ukulungiselela naliphi na ixesha, ngeholide okanye isikhumbuzo, isidlo esikhulu.
Ukulunywa kwe-eggplant kunye ne-ricotta
Esi siqhamo simnandi seqanda kunye ne-ricotta silungile kuwo nawuphi na umcimbi. Iresiphi elula ukuyilungisa kwaye igqibelele ...
Namhlanje ndikuzisela le khekhe imnandi kwaye ilula yemifuno, isitya esikhawulezayo ukulungiselela kwaye silungele nawuphi na umsitho. KU…
Isaladi yafakwa ii-avokhado
Isaladi yafakwa ii-avokhado, elula kwaye elula ukuqala ukutya isidlo. Kunye nesosi epinki kulungile kakhulu.
Intlanzi kunye ne-prawn casserole
Intlanzi kunye ne-prawn casserole sisityebi esityebileyo nesilula, esilungele ukulungiselela ezi holide zizayo. Isitya esipheleleyo.
I-cream yethanga kunye neeproni
I-cream yamathanga kunye ne-prawns isiqalo esithambileyo kunye nesilula, esilungele ukuqala isidlo sepati. Isitya esisempilweni.
Amadombolo afakwe imifuno elungiswe ehovini. Isiqalo esityebileyo nesilula okanye isibheno sokulungiselela, esilungele isidlo sangokuhlwa esisesikweni.
I-Zucchini kunye ne-leek cream
I-Zucchini kunye ne-leek cream cream elula, egudileyo kunye nokukhanya. Ilungele ukulungiselela isidlo sangokuhlwa kwaye sonwabele isidlo esishushu.
I-pizza eyenziwe ngekhabhoni eyenziwe ekhaya
I-pizza eyenziwe yicarbonara yasekhaya, ipitsa emnandi, egcwele incasa kunye necrunchy. Kulula ukulungiselela ipitsa ngezithako ezimbalwa.
Isitshalo seqanda kunye neeleki omelette
I-eggplant kunye ne-leelet omelette, isitya esikhanyayo nesinencindi kakhulu. Isitya esisempilweni esifanelekileyo kwisidlo sangokuhlwa. Kuyakhawuleza kwaye kulula ukuyilungisa.
Iresiphi elula ye-empanadillas yenyama, isitya esimnandi esinombala okhanyayo waseMexico. Ukugqibelela ukusebenza njenge-starter okanye ikhosi ephambili
Umvundla ngegalikhi, i-rosemary kunye ne-thyme
Umvundla ngegalikhi, i-rosemary kunye ne-thyme, isitya esilula esinencasa eninzi. Ilungele lonke usapho. Ikhatshwa ngamanye amafries aseFrance, kufanelekile.
Iilamuni ezigcadiweyo zeminqathe zenza ugcino olufanelekileyo kuzo zombini izitya zenyama kunye neentlanzi. Banike itrayi! Uya kubathanda.
Iimbambo kunye netumato
Iimbambo ezineetumato, isitya esenziwe ekhaya kunye nesosi elula ongenakukwazi ukumelana nokutya isonka. Kuhleli kuphela ukuyikhapha kunye neyona nto uyithandayo.
Inkukhu kwi-sauce kunye nama-mushroom
Inkukhu kwisosi enamakhowa, isitya esilula nesikhawulezayo ukulungiselela. Singayilungiselela kwangaphambili, inokuthi ikhatshwe zezinye iitapile eziqhotsiweyo okanye imifuno.
Iitapile kunye nenyama yenyama
Iitapile kunye nenyama yenyama, isitya esipheleleyo kakhulu ukulungiselela isidlo njengesitya esinye. Isityebi kakhulu kwaye kulula ukuyilungiselela.
Ithanga kunye cream cream
Ithanga kunye nejinja cream, ukhilimu omkhulu wokuhamba nengqele. Isidlo esilula okanye i-starter ilungile, ityebile kwaye igudile.
Isandwich ekhethekileyo yesipelepele kunye neqanda
Iresiphi yesandwich ekhethekileyo eneepepile kunye neqanda, isitya esilula nesikhawulezayo ukulungiselela. Uya kuba nesidlo sangokuhlwa esigqibeleleyo sosapho lonke.
Amakhowa egalikhi aneham
Amakhowa ngegalikhi kunye neham, isitya esilula nesilula. Ukuqala okuhle okanye ukuhambisa inyama okanye intlanzi
Iimbambo ezibhakiweyo ezihlanjiweyo
Iimbambo zihlanjwa ehovini, isitya esilula nesikhawulezayo esiza kuthandwa ngumntu wonke, esilungele ukulungiselela amatheko okanye iindibano nabahlobo.
Isitshizi risotto isitya sendabuko se-Italian gastronomy, isitya esilula nesikhawulezayo. Isiqalo oza kuyithanda kakhulu.
I-galus turkey ham
I-galician turkey ham, iresiphi elula kunye nekhawulezayo yokulungiselela, isitya sendabuko esinokusetyenziswa njengesiqalo sokuqala okanye njengesikhuthazi.
I-leek kunye ne-apile cream
I-leek kunye ne-apile cream sisitya esiphilileyo nesityebileyo, esilungele ukuqala okanye ngesidlo sangokuhlwa esilula. Kuthambile kwaye kuyakhawuleza ukulungiselela.
Inkukhu ifakwe kwi-sauce
Inkukhu ifakwe isosi kunye nemifuno isitya esilula kunye nesahluke kakhulu. Isitya esipheleleyo esithandwa ngumntu wonke, silungele lonke usapho.
IMacaroni netshizi kunye nesosi yetswele
IMacaroni kunye netshizi kunye netswele yesosi iresiphi elula nekhawulezayo ukulungiselela. Ngezithako ezimbalwa sinesitya esilula nesingabizi mali ininzi.
Hake kwisosi ngamaqanda ezigwityi
Hake isosi enamaqanda ezigwityi, isosi elula yesitya seentlanzi esihle kakhulu. Kukulungele ukulungiselela amaqela okanye iintsuku ezizodwa.
Isitshalo seqanda kunye nekhekhe leYork ham
I-eggplant kunye ne-York ham ikeyiki, isitya esipheleleyo nesityebileyo. Isitya esilula esilungele abantwana ukuba batye imifuno.
I-pizza flavour dumplings
Iipitsa ezinencasa ephekwe nge-pizza, ukuluma okumangalisayo kunye okumnandi. Kulula ukuyilungisa, isempilweni kwaye ilungele nawuphi na umsitho
Isaladi yePipirrana, Isaladi yepipirrana ilula kakhulu ukuyilungisa, intle kakhulu kwaye intsha. Eyona nto iphambili kuyo ziitumato, isaladi yePipirrana, isaladi elula netsha. Ngokuqhelekileyo iMurcia nangona ineendidi ezininzi. Iresiphi elungileyo kakhulu.
I-pizza emfutshane ye-crust
Ngokukhawuleza kwaye kulula ukuyilungiselela i-pizza emfutshane. Iyaxinana kwaye yenziwa ngokukhawuleza okukhulu. Ilungele isidlo sangokuhlwa nabahlobo.
Inkukhu kunye noshizi rolls
Inkukhu kunye netshizi zihamba ngendlela emnandi yokutya inkukhu. Eminye imiqolo ezaliswe itshizi enencasa eya kuba nejusi eninzi kwaye igcwele incasa. Inkukhu kunye netshizi ziqengqa isitya esilula ukulungiselela, zilungele abantwana. Isitya esinokulungiselela kwangaphambili.
Isaladi yafakwa amaqanda
Amaqanda agxunyekwe ngesaladi, yenye indlela yokutya isaladi kodwa isitya esigcweleyo, esityebileyo nesilungileyo sokulungiselela ukuqala okanye isidlo sangokuhlwa. Amaqanda agxunyekwe ngesaladi, isitya esilula kunye nesitsha sokulungiselela ukuqala, isitya esipheleleyo esithandwa ngumntu wonke.
Ngale recipe emnandi yenkukhu eluma i-villaroy, uya kuzothusa iindwendwe zakho ngesitya esimnandi nje
I-Lentil stew kunye ne-chorizo
I-Lentil stew kunye ne-chorizo ​​isitya esipheleleyo. Isitya esilula nesikhawulezayo esinokusilungiselela kwangaphambili, silungele ukusetyenziswa kwemihla ngemihla.
Icauliflower okanye i-gratin enesosi ye-béchamel
Icauliflower au gratin enesosi ye-béchamel, isitya esilula, esisempilweni nesikhawulezayo ukulungiselela. Isitya sokulungiselela nawuphi na umsitho.
Iibhega ezincinci nge-anyanisi ye-caramelized
Iibhega ezincinci nge-anyanisi ye-caramelized, ezityebileyo kwaye kulula ukuzilungiselela. Ilungele ukulungiselela isidlo sangokuhlwa ngokungacwangciswanga nosapho okanye nabahlobo.
I-Puff pastry kunye nemifuno eyosiweyo, itshizi kunye nee-anchovies
Namhlanje silungiselela i-cuff pastry coca kunye nemifuno eyosiweyo, itshizi kunye nee-anchovies, ezifanayo kakhulu kwiklasikhi "coca de recapte" yesiko laseCatalonia. isidlo sangokuhlwa nabahlobo okanye njengesiqalo.
Isaladi thowusti ngobisi imayonnaise
Lungisa le thosi yesaladi imnandi ngokuchukumisa okukhethekileyo, imayonnaise eyenziwe ngobisi endaweni yeqanda. Uya kumangaliswa ziindwendwe zakho
Ukubhaka iitapile ngepelepele
Kule veki ndicebisa iitapile ezibhakiweyo ngepelepele, isidlo esimnandi nesilula wonke umntu aya kusithanda. Yintoni ebhetele kunezinye iitapile Ukubhaka iitapile ngepelepele, isitya sesintu esifanelekileyo njengokuhombisa okanye ukuhambelana nenyama okanye izitya zentlanzi.
I-Burgers yenkukhu yasekhaya
I-burger yenkukhu yasekhaya, isidlo esifanelekileyo ngeempelaveki. Ukulungiselela ekhaya kulula kakhulu kwaye kunempilo kakhulu. Sinokubalungiselela iiburger zenkukhu ezenziwe ekhaya, iihambhega ezimnandi kwisidlo sangokuhlwa nabahlobo okanye nosapho. Ukuhamba nesaladi sisitya esikhulu.
Irayisi enenkukhu kunye nemifuno sisitya esimnandi esinokuyonwabela nanini na enyakeni kwaye sisebenzisa imifuno esinayo efrijini. Njengelayisi enenkukhu kunye nemifuno, isitya esinevumba elininzi, irayisi elula ukulungiselela ukuba lonke usapho luyayithanda. Yizame !!!
Isaladi yafakwa iitumato
Isaladi yafakwa iitumato. Isaladi yenye yeezitya zasehlotyeni, isitya esinokusenza sahluka kakhulu kwaye sinokushiya iitumato ezifakwe isaladi, isidlo esifanelekileyo njengesiqalo sehlobo. Kulula ukuyilungisa kwaye sisitya esimibalabala.
I-fajitas yenkukhu, isitya esiqhelekileyo sokutya okuqhelekileyo kwaseMexico, imiqulu elula yokuyilungiselela elungileyo.
Iibhola zenyama esosi kunye nemifuno
Iinyama zenyama esosi kunye nemifuno isitya sendabuko, sikhatshwa yimifuno senza esi sidlo siphambili sibe sisitya esipheleleyo.
Utamatisi kunye nepinapple mince
I-tomato kunye nepineapple mince endiyicebisayo namhlanje ilula kwaye iyahlaziya, igqibelele njenge-snack, igcwalisa kunye nesandwich okanye igcwalise isaladi eluhlaza.
I-lasagna yemifuno kunye ne-cream cream
Imifuno ye-lasagna ene-cream cream, isityebi kwaye kulula ukuyilungisa isidlo. Indlela yokutya imifuno enencasa eninzi eya kuthandwa ngumntu wonke.
Utamatisi, ikhowudi, itshizi kunye nesaladi ye-anchovy
Utamatisi, ikhowudi, itshizi kunye nesaladi ye-anchovy isaladi entsha yehlobo, njengesiqalo sokuqala okanye icala lilunge kakhulu.
I-pie yemifuno kunye neerinki kunye neepine nut
Ipayi yemifuno kunye neerasentyisi kunye namandongomane ompayini, ukuzaliswa kwesosi kunye nokuchukumisa iidiliya zomthi kunye neepine, ipayi enamanzi kakhulu. Zininzi iindidi zemifuno ye-empanada kunye neerasentyisi kunye neepine nut, i-empanada enencasa eninzi, efanelekileyo ukulungiselela isidlo sangokuhlwa kunye nabahlobo. Iya kuthanda kakhulu.
I-eggplant ibetha kwi-tempura
I-eggplant ibethwe kwi-tempura, ubuchule bokubetha apho umaleko otyhafileyo nosisityebi ushiywe. Ilungele ukuqala okanye isikhuthazo.
Amaphiko enkukhu ngobusi lwesardard
Iresiphi yamaphiko enkukhu kunye nesosi yemastadi kunye nobusi, isitya esimnandi esinencasa ekhethekileyo. Kulula ukuyilungisa kwimizuzu embalwa
Iicroquettes zeembaza ezizenzelayo
Ii croquettes ze mussel ezenziwe ekhaya, ukuba ufuna ukulungisa iicroquettes ezimnandi, uya kuzithanda, zilula kwaye zityebile, zilungele isiphephelo.
Iimbambo ezihlanjiweyo kunye neetapile
Iimbambo zihlanjwe ngeetapile ezibhakiweyo, isitya esilula esinencasa eninzi. Ukulungiswa ehovini, iimbambo zityebile kwaye zinamanzi.
Isaladi yeembotyi nge-vinaigrette
Isaladi yeembotyi ezine-vinaigrette, isitya esitsha nesigqibeleleyo. Isaladi elula esinokuyilungiselela ngexesha elifutshane kwaye intle kakhulu.
Amakhowa agqitywe nge-Serrano ham
Iresiphi yamakhowa efakwe i-serrano ham kunye negalikhi, ngokuchukumisa okufihlakeleyo kwelamuni ukujika esi sidlo silula simangalise inkalakahla.
Iimbotyi eziluhlaza kunye netumato, zikhatshwa liqanda elibilisiweyo, isitya esipheleleyo, esilula nesilula. Ilungele isidlo sasemini esilula okanye isidlo sangokuhlwa.
Isaladi eyenziwe ekhaya
Isaladi eyenziwe ekhaya isitya esitsha esisehlotyeni, isitya esinokusilungiselela ngezinto ezahlukeneyo nezityebileyo.
Isitshalo seqanda, ham kunye noshizi lasagna
I-eggplant, i-ham kunye ne-lasagna yeshizi, isitya esikhulu ukulungiselela yonke intsapho. Iresiphi esempilweni, elula kwaye egqibeleleyo.
Paella ngeembambo kunye nemariso
Paella ngeembambo kunye nokutya kwaselwandle, isitya esipheleleyo esinencasa eninzi. Isitya esiya kuthanda lonke usapho. Ilula kakhulu ukuyenza.
I-Tortellini kunye ne-cheese sauce kunye nama-mushroom
I-Tortellinis netshizi kunye nesosi yamakhowa, esona sitya sigqibeleleyo se-pasta. Kunye nesosi itshizi okunencasa.
IMacaroni enesipinatshi kunye nesosi yesonka samasi
IMacaroni enesipinatshi kunye nesosi yesonka samasi, isitya esipheleleyo esigcwele incasa. Isidlo njengesitya esinye. Uya kubathanda !!!
Irayisi emdaka ngamakhowa kunye ne-cuttlefish
Irayisi emdaka enamakhowa kunye ne-cuttlefish isitya esilula esilungele ihlobo. Isitya esilula ukulungiselela okupheleleyo kunye nesityebi.
Amaqanda aqhekezayo ngamakhowa kunye neeprawn
Iresiphi yamaqanda aqhekeziweyo kunye nama-mushroom kunye ne-prawns, isitya esilula esingasilungiselela kwangoko. Ilungele isidlo sangokuhlwa.
Ithenda enesosi eluhlaza okwesibhakabhaka
Jongana ne-sosi yetshizi eluhlaza okwesibhakabhaka isidlo esilula nesikhawulezayo, nencasa eninzi onokuyithanda kakhulu. Isosi umntu wonke ayithandayo.
Iresiphi yebhisikidi okanye ikhekhe ekwabizwa ngokuba ayinakwenzeka, idizethi esisityebi apho ikhekhe kunye neflan zihlangana khona. Ikeyiki ukonwabela.
Hake nge prawns
I-Hake nge-prawns ngegalikhi kunye ne-parsley sauce, isitya seentlanzi esilula nesilula ukulungiselela. Indlela yokutya iintlanzi ngencasa eninzi.
I-ertyisi ene-Serrano ham isitya esilula ukulungiselela, kunye nencasa eninzi. Isitya esineevithamini ezininzi kunye nefayibha. Ilungele isidlo sangokuhlwa esipheleleyo.
I-Aubergines efakwe imifuno, i-starter egcwele iivithamini kwaye iphelele. Isitya esilula ukulungiselela. Khuthaza ukuba uzame !!!
IMacaroni yenkukhu kunye nespinatshi
IMacaroni yenkukhu kunye nesipinatshi isidlo esipheleleyo esiza kuthandwa ngumntu wonke. Singalungisa ipasta ngeendlela ezininzi, kunye nemifuno ilunge kakhulu.
Isisityebi kwaye ilula i-vanilla custard ukulungiselela idessert eyenziwe ngokwasekhaya. Ilungele lonke usapho kunye nedessert kunye nabahlobo.
I-potato omelette ene-chorizo ​​mince
I-potato omelette ene-chorizo ​​mince, i-omelette enencasa eninzi. Enye yee-tapas ezaziwa kakhulu kwi-gastronomy yethu, kufanelekile ukungcamla kwisidlo sangokuhlwa.
IArtichokes kwisosi, isidlo esimnandi nesinempilo kakhulu. Enye indlela yokulungiselela iartichokes. Njengesiqalo okanye ukuhamba nesitya.
I-Ham kunye ne-cheese rolls
I-Ham kunye ne-cheese rolls, ezilungele ukulungiselela isidlo sangokuhlwa, zine-crispy ngaphandle kwaye zicocekile ngaphakathi. Zilungile kakhulu !!!
Isaladi yenkukhu yasentwasahlobo
Namhlanje siphakamisa isaladi yenkukhu ebandayo egqibeleleyo njengesiqalo sokuqala okanye ukugcwalisa iisendwitshi zakho entwasahlobo. Ngaba unesibindi sokuzama?
Ikhowudi kunye nepayi zucchini
Cod kunye zucchini ikeyiki, isitya esityebileyo se-cod kunye nemifuno kunye negratin ebhaka. Isitya esimnandi sabathandi bekhowudi.
I-tenderloin efakwe kunye neetapile
Loin egxunyekwe ehovini ngeetapile, isitya esilula nesityebileyo, esilungele isidlo kunye nabahlobo okanye nosapho. Isitya esipheleleyo nesinomtsalane kakhulu.